Koodh (dhar) - Wikipedia
Koodh (Af Ingiriis : Coat; Af-Carabi: معطف‎) waa shay dabacsan oo ka samaysan dun, ama cudbi, ama harag kaasi oo la tolay. Koodhku wuxuu ka mid yahay dharka dadka kaasi oo inta badan loo xidho si jidhka uga difaaco dhaxanta. Dharka waxaa laga sameeyaa dun ka timaada haraga xoolaha, xayawaanka iyo cudbiga iyo noocyo aartifishal ah. Marka dharka la samaynayo waxa la isticmaalaa habab badan oo kala duwan, waxaa ugu caansan tolida, mareegida, iyo isku xidhxidhka dunta.
Koodhku wuxuu ka mid yahay dharka joogtada ah ee rag iyo dumarba kaasi oo loo xidho in jidhka ka difaaco dhaxanta iyo qaboowga. Sidoo kale, koodhka waxaa loo xidhaa xarago iyo isqurxin, dunida maanta waxaa jira shaqooyinka qaar ay khasab tahay in shaqaaluhu ku soo labistaan koodh. Guud ahaan, koodhku waa maro la tolay taasi oo leh qaab le'eg qofka xidhanaya ama isticmaalaya sheygaasi. Shaadhku wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo ka duwan noocyada kale ee dharka. Astaamaha ugu muhiimsan ee shaadhasha waxaa ka mid ah raqabada, jeeb iyo galuusyo (badhano) badan oo laabta ku dhex yaala.
Ereyga Koodh asal ahaan waa mid Af-Ingiriis ah oo waxaan ka soo xiganahay luuqadaasi Ingiriiska ereyga Coat.
Dharka (Af Ingiriis : Textile ama Cloth; Af-Carabi: نسيج (قماش)‎) waa shay dabacsan oo ka samaysan dun la xardhay. Dharka waxaa laga sameeyaa dun ka timaada haraga xoolaha, xayawaanka iyo cudbiga iyo noocyo aartifishal ah. Marka dharka la samaynayo waxa la isticmaalaa habab badan oo kala duwan, waxaa ugu caansan tolida, mareegida, iyo isku xidhxidhka dunta. God ku yaala galbeedka wadanka Joorjiya ee bariga Yurub ayaa waxa laga helay qidcad harag oo lagu wado in dhar ahaan loo isticmaali jirey wakhti hada laga joogo 34,000 oo sano. Dharka guud ahaan waxaa la isku yidhaahdaa Hu'; kaasi oo u kala baxa noocyo badan. Kugu ugu muhiimsan ee dadku isticmaalaan maalin kasta waxaa ka mid ah: surwaalka, shaadhka, diraca, shalmada, goonada, koodhka, kabaha iyo kuwo kale oo badan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Koodh_(dhar)&oldid=226412"
Last edited on 14 Diseembar 2021, at 20:35
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Diseembar 2021, marka ee eheed 20:35.